Superwing Series Factory - China Superwing Series Abakhiqizi, abahlinzeki
Abalandeli be-18 FT Modern Ceiling Sri Lanka
Ukusebenzisa i-HVLS ukuvikela izakhiwo: ukuvimbela ukukhula kwesikhunta, isikhutha kanye namagciwane ahambisana nomswakama ophezulu, okususa ukukhathazeka kwezempilo nokuphepha nokulungiswa okungadingekile.
Abalandeli be-16Ft Modern Ceiling Singapore
Idizayini yensimbi yesitayela se-OPT Fan ikhiqiza ikholomu enkulu, eyindilinga yomoya leyoyehlela phansi phansi nangaphandle kuzo zonke izinkomba, idala i-jet floor evundlile leyoujikeleza njalo umoya ezindaweni ezinkulu. Le “jet floor evundlile” iphusha umoya kakhudlwana ibanga ngaphambi kokuthi lidonswe libheke phezulu kumaqonde.
Abalandeli be-6.1M Low Velocity Air Cooling
Ezimweni eziningi zezulu, abaphathi bezindawo abanokuncika ekuqothulweni nasekuvulekeni amafasitela ukugcina ukuzinza komoya. Noma kunjalo, umswakama ungaba ngezindlela eziningi. I-HVAC ingazama ukushintsha umoya noma ukuwufaka umoya. Abalandeli be-HVLS basebenza ekwehliseni ukuqwashisa ngamazinga okushisa ngokwanda kokuhwamuka.
“Elinye lamakhasimende ethu okusebenza kwe-onsite lithole ukufakwa kwe-fan yethu enkulu ye-HVLS ngaphezu kwe- amasenti amathathu onyawo ngalunye lusebenza kangcono kunohlelo lwabo olulodwa lwe-HVAC. ”
I-HVLS Epholisa Uphahla Abalandeli Abakhulu
I-HVLS yokupholisa ophahleni abalandeli abakhulu VULA abalandeli be-HVLS technology igcina ama-workshops enethezekile, yehlisa ukusetshenziswa kwamandla. Ngokwenza ngcono ukuhamba komoya, abalandeli bethu balawula amazinga okushisa angaphakathi aze afike ezingeni lokuthi izindleko zokushisa nokupholisa zehle. Ezikhungweni ezingenalo uhlelo lwe-HVAC, Superwing motor PMSM motor ……
Abalandeli Abakhulu be-Hugh Ceiling HVLS
Abalandeli be-HVLS Bangabhekana Kanjani Nezinkinga Zokushisa Nomoya
Ukubhekana nalolo daba maqondana nabalandeli be-HVLS, indawo yezemidlalo noma umnikazi wendawo idinga ukubheka ukushisa okwenziwe ngumlandeli.
Ingabe ukupholisa nokushisa temamandla anikezwe okulungile? Lapho bethola ukuthi lokhu akuyona, kahle manje yisikhathi ukuze bacele usizo lochwepheshe kulabo bantu abahlonyiswe nge- amakhono nolwazi lokuthi ungakwenza kanjani ukufakwa okufanelekile kwabalandeli be-HVLS.
Ukuthola isisombululo sokupholisa esisebenza kahle futhi esingabizi kakhulu kubalulekile kakhulu
warehouse abaphathi. Ikhono labalandeli be-HVLS lokwehlisa umoya nokusebenzisa izinkulungwane zabanqobile ngosuku ukufakazela isixazululo esihle kakhulu sabaphathi bezikhungo kanye nezinqolobane emhlabeni jikelele.
Abalandeli be-7.3M Gym Energy Saving
Umlandeli omkhulu we-HVLS ububanzi obungamamitha angu-24 uhambisa ngobumnene umthamo omkhulu womoya ufike kuma-22,000 izinyawo eziyizikwele futhi ungene esikhundleni sabalandeli abaphansi abangu-15 kuye kwangama-30. Ngokuxuba umoya, abalandeli be-HVLS nabo basiza i-air-conama-ditioning systems asebenza kahle, ebavumela ukuthi basebenze endaweni ebekiwe kuze kufike ama-degree amahlanu ngaphezulu.
I-20Ft Abalandeli Abakhulu Bophahla
Kusetshenziswa i-HVLS esikhundleni sabalandeli abajwayelekile: umsindo omncane, ukusetshenziswa kwamandla amancane, imfucuza encane. 1 iyunithi 20 'I-HVLS ingathatha indawo yabalandeli abayisithupha abajwayelekile abasebenza ngesivinini esikhulu, ukuhlinzekela ngamaphesenti angama-90 ukusetshenziswa kukagesi.
Abalandeli be-Gym Cool 24Ft
Vocavoca umzimba ukuze ujabule futhi ube nempilo, hhayi nje ukunciphisa isisindo. Empilweni yanamuhla wonke umuntu ufuna ukuba uphilile futhi unempilo. Ukuze ulingane futhi ube muhle, ngale njongo evamile wonke umuntu wenza umsebenzi onzima womzimba kuIjimu. Wonke umuntu ujuluka futhi uzizwa enomswakama ngenkathi ezivocavoca umzimba. I-OPT HVLS ijikeleza inani elikhulu womoya ohlanzekile, owenza umzimba womuntu ube nomswakama mahhala futhi omusha.
24 FT HVLS Commercial Usayizi Olukhulu PMSM Motor Fan
I-HVLS yezimboni fan enkulu yophahla ophahleni Isingeniso- I-HVLS yezimboni fan enkulu yophahla ophahleni Enye yezinto ezikhathaza kakhulu abaphathi besikhungo esikhulu sezohwebo noma isikhungo ukusebenza kahle kwamandla. Ukukhula kwezindleko zamandla kungenza ukushisa nokupholisa indawo enkulu kubize kakhulu. Manje, une ……